I-Android: Izicelo zokusebenzisa i-Linux Operating System kuselula | Kusuka kuLinux
Kuwo wonke umthandi we «Informática» bekulokhu kuyiphuzu elithusayo, lokukwazi ukufeza izinga eliphelele le-«convergencia» o «universalización» phakathi kokuhlukile «Plataformas de SW» zedivayisi ngayinye. Lokho wukuthi, ukufeza gijima ngaphakathi kwe- «Sistema Operativo»ehlukile noma okungenani ukusetshenziswa kwayo. Ngalokho bahambe isikhathi bephelelisa «Tecnologías de emulación y virtualización», kungaba ngokusebenzisa «Máquinas Virtuales» o «Contenedores».
Kwezinye izindatshana ezedlule we-Blog, sibonile nokuthi ukuthambekela nokusebenza ngempumelelo kokuzuza i-a «Sistema Operativo» i-cross-platform noma i-hyper-converged, okungukuthi, a «Sistema Operativo» kuzo zonke izinhlobo ze Ama-Desktops, ama-laptops, amafoni weselula, amathebulethi namanye amadivayisi we-smart. Ukuba, icala lokugcina elikhona emhlabeni, lelo le- IHuawei Operating System, ebizwa ngeHarmony OS. Kodwa-ke, kulokhu okuthunyelwe sizogxila ekuphawuleni kafushane kuzicelo zamanje zokusebenzisa a Uhlelo Lokusebenza lwe-Linux kuselula ene Android.
Okwethu, «Usuarios de Linux», bekulokhu kuyilukuluku ngisho nenselelo yomuntu siqu kanye / noma yomphakathi, ukwazi ukufaka noma iyiphi «Distro Linux», noma esikuthandayo noma okwethu «Distro Linux» ngqo kudivayisi noma ithebhulethi ephathekayo, noma okungenani uyiqhube ngendlela ebonakalayo kuyo.
Okwesibili, okuvame ukuthi kube lula ukusebenzela noma ngubani onolwazi oluncane noma oluphakathi, yilezi zicelo ezilandelayo esizokhuluma ngazo ngezansi. Ngendlela yokuthi, ngalezi zinhlelo zokusebenza, kanye nezinyathelo ezimbalwa ezilula, cishe noma ngubani angazisebenzisa, ezimeni ezilula, ezinye izinzuzo zabanye «Distros Linux» kuselula noma uyenze icishe ibe yikhompyutha ephelele ngokusebenzisa ngokuphelele «Distro Linux».
1 Izinhlelo zokusebenza ze-Android zokusebenzisa i-Linux
1.1 Gcwalisa isifaki seLinux
1.2 I-GNURoot Debian
1.2.2 Isinyathelo 1 - Kusuka ku-GNURoot
1.2.3 Isinyathelo 2 - Kusuka kuXServer
1.2.4 Isinyathelo 3 - Kusuka ku-GNURoot
1.2.5 Isinyathelo 4 - Kusuka kuXServer
1.3 I-Linux Sebenzisa
1.3.2 Isinyathelo 1 - Linux Deploy
1.3.3 Isinyathelo 2 - Isibukeli se-VNC
Izinhlelo zokusebenza ze-Android zokusebenzisa i-Linux
Gcwalisa isifaki seLinux
Gcwalisa isifaki seLinuxisicelo esisemthethweni se- «Android», iyatholakala ku- «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- 5 September ka-2016, futhi okwamanje okukuhumusho lwayo 3.0 BETA futhi itholakalela i-«Android» version Izinhlobo ezingu-4.0.3 nezamuva.
Ngokuyisisekelo, ikuvumela ukuthi ufake i-«Distro Linux»kusebenza ngokuphelele ngaphakathi «Android», ngendlela yokuthi isebenza ngokufana nokuthi ifakiwe kukhompyutha ebonakalayo. Ngakho-ke, uma kungenzeka, uma ikhibhodi negundane kungaxhunywa kuselula, kufanele kutholakale futhi kubonwe yi «Distro Linux» futhi ugijime kahle.
Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu. Kepha, ngaphambi kokuthi uqalwe, kufanele ngabe ubusebenzisa i- «Depuración de USB», etholakala ku «Opciones de desarrollo», kusuka «Menú de ajustes» de «Android». Ngemuva kokufakwa nokwenza, kufanele ucindezele inketho «Install Guides» okuzokhombisa okuhlukile «Distros Linux» kusekelwa yidivayisi yethu esetshenzisiwe, ezohluka ngokuya ngohlobo lwe- «Android» ifakiwe kanye neprosesa yedivayisi.
Ngemuva kokukhetha noma iyiphi yazo, kufanele uchofoze inkinobho «Download Image», ukuze uqhubeke nokukhetha usayizi ofanayo, phakathi kwalabo abakhona, bese uqeda ngokucindezela inkinobho. «From Sourceforge», ukulanda ifayela le- «Distro Linux» kusuka kuwebhusayithi.
Khumbula, lapho ukhetha usayizi we «Distro Linux» Kufanele ufake, kufanele ucabangele ukuthi uma usayizi ukhethiwe, uzoba ophelele ngokwengeziwe. Futhi khetha efanelekile, ngokuya ngesikhala samahhala esitholakala kudivayisi yakho. Uma ufuna okuphelele kakhulu, hlala ukhetha inketho «Download Large Image».
Ukusebenzisa «Complete Linux Installer» Kuyanconywa futhi ukuthi ufake ngaphambilini izinhlelo zokusebenza ezi-2 eziwusizo zokufinyelela kude ne-Call Terminal «VNCViewer App» y «Terminal App», afakwe ngqo kusuka esigabeni esifanayo esibizwa ngokuthi «Page 2» kwesicelo esishiwoyo.
Ngakho lokho okuke kwalayishwa futhi kwavula uziphu «Distro Linux» ne «Gestor de archivos» okuthandayo, kumzila othile, okungcono una «Tarjeta de Memoria SD» okungenani 8 noma 16 GB, kukhonjiswa ku «Complete Linux Installer» kusho umzila, ngokusebenzisa inkinobho ebizwa «Launch». Yize, phambilini esigabeni kubizwe «Settings» futhi ngenketho ebizwa «Edit» isicelo kumele sitshelwe indlela ye- «Distro Linux» kuvulwe uziphu.
Lapho lesi sinyathelo sesiqediwe, ugcwalisa izinyathelo ezidingekayo, udinga ukucindezela inkinobho ebizwa «Start Linux» ukuqala ngokuzenzekelayo «Terminal App», Ezosibuza ukuthi sifuna ukubheka ifayela le- «Distro Linux» kuvulwe uziphu. Isinyathelo esingeqa, ukubhala ifayili le- «letra n» bese ucindezela inkinobho «Intro». Kwesinye isikhathi, «Complete Linux Installer» Lapho kwenziwa kuleli phuzu, icela ukufaka iphasiwedi ye-akhawunti yomsebenzisi kanye / noma ukukhombisa ukulungiswa kwesikrini sedivayisi.
Ukusuka kuleli phuzu, futhi ekugcineni kokulayisha i- «Distro Linux», umugqa uvela nemiyalo «root@localhost:/ #», okukhombisa ukuthi sidinga ukufinyelela kuphela i- «GUI» of efanayo ngokusebenzisa «VNCViewer App», ngoba asikwazi ukufinyelela ngqo kulokhu, ngoba kunjalo «Android», the «Sistema Operativo» osevele usebenzisa i- «Entorno Gráfico» zedivayisi.
Ngakho-ke, ukuze siqede kufanele siqale «VNCViewer App» faka amapharamitha wokuxhuma adingekayo futhi ngokuvamile afingqiwe njengo
Isidlaliso: Igama lomsebenzisi le-Linux Distro
Iphasiwedi: Iphasiwedi ezenzakalelayo yomsebenzisi we-Linux Distro
Ngemuva kwalokho, qeda ngokucindezela inkinobho ebizwa «Connect» ukuze kuvele okulindelwe «GUI» we «Distro Linux». Uma kukhona, kuzobe kulahlekile uma kunesidingo, chofoza inkinobho ongakhetha kukho «AndroidVNC» ukumisa indlela yokulawula isikhombi, ukukala kwewindi noma izinqamuleli zekhibhodi ukuthuthukisa ukufinyeleleka kwe- «Distro Linux» cishe «Android». Konke okunye, kusele ukusebenzisa i «Distro Linux» ngokubona komsebenzisi.
Ukwenza okuhle kwe «Complete Linux Installer» I-Linux Distros eza ngefomethi ebukhoma iyanconywa futhi ngakho konke okungenzeka sekuvele kufakiwe ukuze uma kunesidingo, ungayifaki. Isincomo esihle, maqondana nalokhu, yi-DEBIAN, Ubuntu, MX-Linux neMilagrOS.
I-GNURoot Debianisicelo esisemthethweni se- «Android», iyatholakala ku- «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- 3 Agasti 2018, futhi njengamanje izinguqulo ezahlukahlukene, kuya ngohlobo lwe «Android» lapho izofakwa khona, ingaqinisekisiwe ngokuhambisana okugcwele, kusukela kunguqulo 8.0 kuye phambili.
Ezimweni lapho inguqulo ye- «Android» ayihambisani ne- «GNURoot Debian» se Kunconywa ukusebenzisa «UserLand», ikakhulukazi uma kunguhlobo lwesimanje lwe-«Android», okungukuthi, inguqulo 8.0 noma ngaphezulu.
Ngokuyisisekelo, kuvumela noma kunika amandla ukungena ngemvume ku-«Terminal de Linux»nezimvume ze«súper-usuario (root)», ukuze babulawe ngokushiwo «Interfaz de Línea de Comandos (CLI)», imiyalo edingekayo yemiyalo, bese ufaka ifayela le- «Entorno de Escritorio» nokunye «aplicaciones GNU» kudingekile noma kuyadingeka.
Kuyinto «App» evame ukusetshenziswa ngokuhlanganiswa ne- I-XServer XSDL, njengoba kukhona enye, kuzophatha ukuvumela ukubonwa kwemidwebo yekhompyutha ye-Linux, okungukuthi, «Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)»Ngamanye amagama, izolingisa ukuqapha kwethu.
Ukusetshenziswa kwayo akunzima kakhulu, ngoba uma owokuqala usenziwe, kufanele uqhubeke nokuvuselela i- «Sistema Operativo Linux» bese ufaka ifayela le- «Entorno de Escritorio», mhlawumbe elula futhi elula efana «XFCE» o «LXDE», nakho konke okunye okudingekayo. Futhi ekugcineni, phakamisa «GUI» i-del «Sistema Operativo». Ngamafuphi, inqubo ejwayelekile ehlanganisiwe izobukeka kanjena:
Isinyathelo 1 - Kusuka ku-GNURoot
Qalisa: apt-get update
Qalisa: apt-get install lxde
Qalisa: apt-get install xterm synaptic pulseaudio
Shintshela ku: I-XServer
Isinyathelo 2 - Kusuka kuXServer
Setha: Ukulungiswa kanye ne-DPI
Linda: Isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka
Ukubuyela ku: I-GNURoot
Isinyathelo 3 - Kusuka ku-GNURoot
Qalisa: export DISPLAY=:0 PULSE_SERVER=tcp:127.0.0.1:4712
Qalisa: startlxde &
Ukubuyela ku: I-XServer
Isinyathelo 4 - Kusuka kuXServer
Linda: Isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka esizonyamalala lapho.
Buka futhi usebenzise: Imvelo yedeskithophu ifakiwe.
I-Linux Sebenzisaisicelo esisemthethweni se- «Android», iyatholakala ku- «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- 22 Agasti 2019, futhi njengamanje isenguqulweni 2.4.0 futhi itholakalela i-«Android» inguqulo 4.0.3 nezinguqulo zakamuva.
Lolu hlelo lokusebenza lwe «código abierto»kusiza ukufakwa okusheshayo nokulula kwefayela le- «Sistema Operativo GNU/Linux» kudivayisi ephathekayo ene «Android». Njengoba ukufakwa okujwayelekile kuvame ukuthatha imizuzu eyi-15.
Abadali bayo batusa ukuthi ubukhulu obuncane besithombe sediski se-«Distro Linux» ukusebenzisa ne- «GUI» ngu-1024 MB (1GB) futhi ngaphandle«GUI» I-512 MB (1/2 GB). Futhi lokho lapho uyifaka kufayela le- «Tarjeta Flash» ne «Sistema de archivos FAT 32», usayizi wesithombe ungeqi ku-4098 MB (4 GB).
Ngaphezu kwalokho, beluleka ukuthi ngemuva kokufakwa kokuqala nokumiswa, iphasiwedi ye-«SSH» y «VNC» kwenziwa ngokuzenzakalela. Ukwazi ukuyiguqula ngezinketho «Properties -> User password" (Propiedades -> Contraseña de usuario)» noma usebenzisa amathuluzi ajwayelekile kusuka ku- «Sistema Operativo» esetshenzisiwe, okungukuthi, imiyalo «passwd» o «vncpasswd».
Lolu hlelo lokusebenza libuye lincike ekusetshenzisweni kwezinye izinhlelo ezi-2 eziwusizo, ezibizwaI-BusyBox y Isibukeli se-VNC. Ukuba ngowokuqala, iqoqo lamathuluzi avula ifoni ephathekayo «Android» ukwazi ukusebenzisa eziningana «comandos de Linux» kubalulekile ku «Distros Linux» sebenza futhi usebenze ngokugculisayo. Eyesibili, uhlelo lokusebenza ledeskithophu ekude elisetshenziselwa ukudala iwindi lapho i «Distro Linux» isebenza ngaphakathi kweselula «Android».
Isinyathelo 1 - Linux Deploy
Ngemuva kokufaka izinhlelo ezi-3, nokwenza «Linux Deploy» amapharamitha alandelayo kufanele amiswe kumenyu yokuhlela:
distribution: Khetha uhlobo lweLinux Distro ongalusebenzisa
Nika amandla: Nika amandla ukusetshenziswa kwe-Graphical Environment ye-Linux Distro ukusebenzisa
Isistimu Engaphansi Yezithombe: Khetha i-VNC
Indawo yeDeskithophu: Khetha uhlobo lwe-Graphical Environment ye-Linux Distro ongayisebenzisa
Ububanzi / Ukuphakama: Khetha okunconyiwe I-1920 x 1080 noma ngaphezulu yamaThebulethi ne-1024 × 576 noma i-1152 × 648 yama-Smartphones.
Igama olisebenzisayo: Lungiselela igama lomsebenzisi le-Linux Distro ukuze ulisebenzise
Iphasiwedi yomsebenzisi: Lungiselela Iphasiwedi Yomsebenzisi weLinux Distro ozoyisebenzisa
Faka Inketho: Ukufaka ngokuvamile kuthatha imizuzu eminingana, kuya ngejubane ledivayisi esetshenziswayo.
Inqubo yokufaka iphela ngomyalezo «<<< desplegar» inkinobho icindezelwe «OK» futhi kugcina ukulinda ukuthi umyalezo ukhonjiswe «<<< Start» bese uya ekusetshenzisweni kwe- «VNC». Kuze kube manje, i «Distro Linux» iyasebenza futhi iyasebenza.
Isinyathelo 2 - Isibukeli se-VNC
Lapho nje uhlelo seluqalisiwe «VNC Viewer», kufanele sengeze ukuxhumana okusha ngokucindezela isithonjana nophawu «+» ezansi kwesokudla, nasenkethweni entsha eyenziwe ebizwa ngokuthi «Nueva conexión» igama kufanele lifakwe «localhost» ebhokisini lombhalo elibiziwe «Address» negama esizikhethele lona ebhokisini lombhalo elibiziwe «Name». Ekugcineni, kufanele sicindezele inkinobho ebizwa «Create» ukuqeda.
Ukuqhuba yethu «Distro Linux» kufanele sicindezele yethu ukuxhumana okusha kudalwe ku- «VNC Viewer» ukuyisebenzisa nokuyisebenzisa.
UmsebenzisiLand isicelo esisemthethweni se- «Android», iyatholakala ku- «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», kugcine ukubuyekezwa ngo-12 Agasti 2019, futhi njengamanje isenguqulweni 2.6.2 futhi etholakalayo «Android» inguqulo 5 nezinguqulo zakamuva.
Abadali bayo bathi ihlinzeka ngendlela elula yokwenza uhlelo lwe- «Distro Linux» noma nje a«aplicación de Linux» cishe «Android». Njengoba ivumela ukuthi zifakwe endaweni noma efwini. Ngaphezu kwalokho, zinikeza ukusetshenziswa okuhle kakhulu futhi enamandla «CLI» Iyakwazi ukuvumela ukufakwa kwamaphakeji, ukuhlanganiswa kokusebenzisekayo, ukusetshenziswa kwemidlalo esuselwa embhalweni, phakathi kwezinye izinto eziningi.
«UserLand» yadalwa futhi inakekelwa ngenkuthalo ngabantu abalandela uhlelo lokusebenza «GNURoot Debian», ukuze esikhathini esizayo esiseduze kube ukubuyiselwa okucacile kokufanayo kuzinguqulo ezintsha ze «Android».
Lapho iqala «UserLand» okokuqala, iveza uhlu lokusabalalisa okuvamile kwe-Linux nezinhlelo zokusebenza. Uma uchofoza kunoma yikuphi kwalokhu, kuvela uchungechunge lwezinkomba zokumiswa okufanele zilungiswe, ukuze kamuva ifayela le- «Distro Linux» noma i «aplicación de Linux» ingalandwa futhi ilungiselelwe. Futhi kamuva ifinyelelwe futhi yasetshenziswa ngohlelo lokusebenza lwe-Terminal noma Remote Access njengalezi ezedlule.
Noma, kunqubo yokufaka «UserLand» uncoma ukusetshenziswa kwe «bVNC (Secure VNC Viewer)» njengohlelo lokusebenza lokufinyelela okukude. Futhi ngesizinda esikhulu salolu hlelo lokusebenza lwesimanje ungafinyelela iwebhusayithi yalo esemthethweni kusixhumanisi esilandelayo UmsebenzisiLand.
Siyethemba ukuthi le ndatshana ilusizo olukhulu kuwe kulo msebenzi okhangayo wokusebenzisa ifayela le- «Distro Linux» cishe «Android». Khumbula ukuthi kunezinye izinhlelo zokusebenza ezenze imisebenzi efanayo ngokuhamba kwesikhathi, njenge «DEBIAN noroot» futhi abasasebenzi ku «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», kepha kukhona ezinye eziningi ezifanayo kakhulu, ezingcono noma eziphansi, ongazisebenzisa futhi nocwaningo oluncane ngokufinyelela okulandelayo isixhumanisi.
Uma uke wasebenzisa noma njengamanje noma yikuphi okukhulunyiwe noma okunye, ungami phawula i-athikili ngakho-ke ungabelana ngolwazi lwakho oluyigugu ngale ndaba nodaba nomphakathi wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Android: Izicelo zokusebenzisa i-Linux Operating System kuselula
I-Android inguLwesithathu, kufana nokuthi kufakwe iWindows ... inzima futhi igcwele udoti, ukhula lwenkohlakalo egcwele ifoni kuyidrama futhi ukukhanyisa le nto kufanele usebenzise iWindows!
Lesi sitolo yizinhlelo zokusebenza ezimbi kakhulu, eziningi, zonke ziyafana futhi cishe azisebenzi.
Ngokuqinisekile ukusebenzisa i-Linux kernel ayikwenzi kube yiLinux uqobo.
UFer B. kusho
… .Kungasiza kakhulu uma izindatshana zenziwe usuku lwazo, ngoba angazi noma ngabe ngifunda okuthile muva nje noma eminyakeni emi-4 eyedlule.
Phendula ku-Fer B.
Sanibonani Fer! Lo mbhalo ungomhla ka-05/09/2019.
I-United States inikeze iHuawei ezinye izinsuku ezingama-90 ukuthi iqhubeke nemisebenzi yayo